သူများမေမေ နှင့် ကျွန်မမေမေ - For her Myanmar
သူများမေမေ နှင့် ကျွန်မမေမေ
ချစ်ရတဲ့ယောင်းယောင်းတို့ရေ။ ဒီနေ့ အမေများနေ့မှာ ကိုယ့်အမေတွေကို ဘာစပရိုက်တွေ တိုက်ပြီးပြီလဲ။ အက်ဒမင်ကတော့ ငမွဲပီပီ ဘာမှမဝယ်ပေးနိုင်သေးတာနဲ့ အိမ်အလုပ်တွေကူလုပ်ပေးလိုက်တယ်။ လွယ်တော့မလွယ်ဘူး စပရိုက်တိုက်တတ်ရတာပေါ့ 😀
မေမေ့ကို စပရိုက်တိုက်ရင်း ကိုယ့်မေမေနဲ့ သူများမေမေတွေ မတူတဲ့အကြောင်းလေး ယောင်းတို့ကို ပြောပြချင်လာလို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးလိုက်ရပါတယ်ရှန်…
သူများမေမေတွေက ၆နာရီထိုးပြီဆို ၇နာရီထိုးပြီဆိုပြီး ဂျင်းထည့် နှိုးတယ်။
ကိုယ့်မေမေက ၈နာရီကို ခုမှ၆နာရီပဲရှိသေးတယ်ဆိုပြီး ဂျင်းထည့်သိပ်တယ်။ (ဂျင်းတော့ ဂျင်းပဲ… နောက်ကျမယ့် ဂျင်းတွေ :3 )
သူများမေမေတွေက အပြင်သွားတာမကြိုက်ရင် မသွားခင်ဆူတယ်။
ကိုယ့်မေမေက သွားခါနီး အကြည်တသာပဲ ခွင့်ပေးပြီး ပြန်လာမှ ပေါင်းဆူတယ်။
Related Article >>> မေမေနဲ့အတူ ဒါတွေလုပ်ရင်း “အမေများနေ့”ကို ကုန်ဆုံးလိုက်ပါ
၃။ မုန့်ဖိုး ဘတ်ရင်
သူများမေမေတွေက သင်တန်းအတွက်ဆိုပြီး ပိုက်ဆံပိုဘတ်ရင်ဆူတယ်။
ကိုယ့်မေမေက ဖေဖေ့ဆီက ပိုက်ဆံပိုဘတ်ဖို့ မြှောက်ပေးတာမျိုး.. (မုန့်ဖိုးပိုရအောင်လို့တဲ့)
ကျိန်းသေတာပေါ့.. သူများမေမေတွေက စာမကျက်ရင် အသေဆူမှာဆိုတာ…
ကိုယ့်မေမေက စာအရမ်းမကျက်ဖို့ ပြောပြီး ဆူပါတယ်ရှင်.. (အိပ်ရေးပျက်ရင်နေမကောင်းမှာ စိုးလို့)
Related Article >>> အမေများနေ့မှာ အမေ့ကို ဘယ်လိုလက်ဆောင်မျိုး ပေးသင့်လဲ?
၅။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ
သူများမေမေတွေက ကိုယ့်သား၊သမီးရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကိုယ့်သားသမီးလိုပဲ ဆက်ဆံတယ်။
ကိုယ့်မေမေကျတော့ သူတို့နဲ့ သူငယ်ချင်းပေါင်း ပေါင်းပစ်တယ်။ (ကိုယ့်သူငယ်ချင်းလား၊ မေမေ့သူငယ်ချင်းလား မသဲကွဲ -_- )
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ။ မေမေတွေေ အားလုံးမှာ တူညီတဲ့အချက်တစ်ချက်တော့ရှိတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထက် ကိုယ့်သားသမီးတွေကို ပိုချစ်ပေးကြတာပါပဲ။
ယောင်းယောင်းတို့ရေ.. အမေများနေ့မို့လို့ အမေပုံတင်ပြီး ဂုဏ်ပြုပေးတာလုံးဝမမှားပါဘူး။ အမေများနေ့မှ သည်းသည်းလှုပ်ပုံတင်တယ်ဆိုပြီး အပြစ်တင်ဝေဖန်နေတာတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်နေဖို့ မလိုပါဘူးနော်.. ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မေမေကို ချစ်တဲ့ အချစ်ကို ပြတာ မှားတာမှ မဟုတ်ပဲ… ပြီးတော့ သားသမီးတော်တော်များများက ကိုယ့်မိဘအပေါ် ဆိုးခွင့်ရလို့ ဆိုးကြတာပဲလေ.. ဒီလိုဆိုးတာလေးတွေကို လျစ်လျူရှုပြီး ချစ်ပေးတဲ့ မေမေတွေကို ဒီနေ့တစ်ရက်လေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိမ္မာပြပြီး မေမေတို့ ကျေနပ်ပြီး ပျော်ရွှင်သွားအောင် ကိုယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးနဲ့ စပရိုက်လေးတွေ တိုက်လိုက်ကြပါလို့…
ခဈြရတဲ့ယောငျးယောငျးတို့ရေ။ ဒီနေ့ အမမြေားနမှေ့ာ ကိုယျ့အမတှေကေို ဘာစပရိုကျတှေ တိုကျပွီးပွီလဲ။ အကျဒမငျကတော့ ငမှဲပီပီ ဘာမှမဝယျပေးနိုငျသေးတာနဲ့ အိမျအလုပျတှကေူလုပျပေးလိုကျတယျ။ လှယျတော့မလှယျဘူး စပရိုကျတိုကျတတျရတာပေါ့ 😀
မမေကေို့ စပရိုကျတိုကျရငျး ကိုယျ့မမေနေဲ့ သူမြားမမေတှေေ မတူတဲ့အကွောငျးလေး ယောငျးတို့ကို ပွောပွခငျြလာလို့ ဒီဆောငျးပါးလေးကို ရေးလိုကျရပါတယျရှနျ…
သူမြားမမေတှေကေ ၆နာရီထိုးပွီဆို ၇နာရီထိုးပွီဆိုပွီး ဂငျြးထညျ့ နှိုးတယျ။
ကိုယျ့မမေကေ ၈နာရီကို ခုမှ၆နာရီပဲရှိသေးတယျဆိုပွီး ဂငျြးထညျ့သိပျတယျ။ (ဂငျြးတော့ ဂငျြးပဲ… နောကျကမြယျ့ ဂငျြးတှေ :3 )
သူမြားမမေတှေကေ အပွငျသှားတာမကွိုကျရငျ မသှားခငျဆူတယျ။
ကိုယျ့မမေကေ သှားခါနီး အကွညျတသာပဲ ခှငျ့ပေးပွီး ပွနျလာမှ ပေါငျးဆူတယျ။
Related Article >>> မမေနေဲ့အတူ ဒါတှလေုပျရငျး “အမမြေားနေ့”ကို ကုနျဆုံးလိုကျပါ
၃။ မုနျ့ဖိုး ဘတျရငျ
သူမြားမမေတှေကေ သငျတနျးအတှကျဆိုပွီး ပိုကျဆံပိုဘတျရငျဆူတယျ။
ကိုယျ့မမေကေ ဖဖေဆေီ့က ပိုကျဆံပိုဘတျဖို့ မွှောကျပေးတာမြိုး.. (မုနျ့ဖိုးပိုရအောငျလို့တဲ့)
ကြိနျးသတောပေါ့.. သူမြားမမေတှေကေ စာမကကျြရငျ အသဆေူမှာဆိုတာ…
ကိုယျ့မမေကေ စာအရမျးမကကျြဖို့ ပွောပွီး ဆူပါတယျရှငျ.. (အိပျရေးပကျြရငျနမေကောငျးမှာ စိုးလို့)
Related Article >>> အမမြေားနမှေ့ာ အမကေို့ ဘယျလိုလကျဆောငျမြိုး ပေးသငျ့လဲ?
၅။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တှတေဲ့အခါ
သူမြားမမေတှေကေ ကိုယျ့သား၊သမီးရဲ့ သူငယျခငျြးတှကေို ကိုယျ့သားသမီးလိုပဲ ဆကျဆံတယျ။
ကိုယျ့မမေကေတြော့ သူတို့နဲ့ သူငယျခငျြးပေါငျး ပေါငျးပဈတယျ။ (ကိုယျ့သူငယျခငျြးလား၊ မမေသေူ့ငယျခငျြးလား မသဲကှဲ -_- )
ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈပါ။ မမေတှေေေ အားလုံးမှာ တူညီတဲ့အခကျြတဈခကျြတော့ရှိတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျထကျ ကိုယျ့သားသမီးတှကေို ပိုခဈြပေးကွတာပါပဲ။
ယောငျးယောငျးတို့ရေ.. အမမြေားနမေို့လို့ အမပေုံတငျပွီး ဂုဏျပွုပေးတာလုံးဝမမှားပါဘူး။ အမမြေားနမှေ့ သညျးသညျးလှုပျပုံတငျတယျဆိုပွီး အပွဈတငျဝဖေနျနတောတှကေိုလညျး ဂရုစိုကျနဖေို့ မလိုပါဘူးနျော.. ဘယျအခြိနျပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့မမေကေို ခဈြတဲ့ အခဈြကို ပွတာ မှားတာမှ မဟုတျပဲ… ပွီးတော့ သားသမီးတျောတျောမြားမြားက ကိုယျ့မိဘအပျေါ ဆိုးခှငျ့ရလို့ ဆိုးကွတာပဲလေ.. ဒီလိုဆိုးတာလေးတှကေို လဈြလြူရှုပွီး ခဈြပေးတဲ့ မမေတှေကေို ဒီနတေ့ဈရကျလေးပဲ ဖွဈဖွဈ လိမ်မာပွပွီး မမေတေို့ ကနြေပျပွီး ပြျောရှငျသှားအောငျ ကိုယျနိုငျတဲ့ နညျးလမျးလေးနဲ့ စပရိုကျလေးတှေ တိုကျလိုကျကွပါလို့…
Tags: different, Fun, Mine, mom, Others, same
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်ပြီး ယုံကြည်မှုမြင့်မားတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ အမူအကျင့် (၅) မျိုး
ခရီးသွားရတာ ကြိုက်တဲ့ ယောင်းလေးတွေ မဖြစ်မနေ See first လုပ်ထားသင့်တဲ့ ခရီးသွား ဘလော့ဂါ (၆)ယောက်
Christina Rosy May 12, 2019
ယောင်းတို့နှလုံးသားကို ထိရှသွားစေမယ့် Joox Myanmar Top Chart က သီချင်း(၅)ပုဒ်
Yin Sandi Ko May 31, 2019
ဘယ်လိုကြည့်ကြည့်၊ ကြည့်မဝတဲ့ ကမ္ဘာ့အလှဆုံးကလေး (၇)ယောက်
Wathun May 29, 2019